Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Klas golf/ebe ntụrụndụ kacha ewu ewu na US
United States na -enwekarị mmasị na golf. Agbanyeghị na egwuregwu sitere na Britain, US nwere 45% nke akụrụngwa golf ụwa ma na -akwado ọtụtụ asọmpi ukwu.
Ihe dị egwu 36.9 nde Ndị America gbara golf n'afọ 2020 naanị.
Ọ bụghị ihe ijuanya na obodo a nwere ọtụtụ akụkọ egwuregwu golf.
Dabere na nyocha emere site na webụsaịtị ntụnyere ụgbọ elu Chọta ụgbọ elu dị ọnụ ala, anyị achịkọtara ndepụta egwuregwu golf na ebe ntụrụndụ kacha ewu ewu na US.
Akwụkwọ ntuziaka a ga -eme ka ị ghọta ụfọdụ klọb golf kacha n'ụwa. Site na ndị njem limousine ruo ụgwọ ndị otu $ 250,000, enwere ọtụtụ ihe na klọb ndị a karịa naanị egwuregwu golf.
Klaasị golf na ebe ntụrụndụ kacha ewu ewu na US
Ọtụtụ klọb golf na ebe ntụrụndụ ama ama na US ka etinyere karịa afọ 50 gara aga. Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Hollywood na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị siri ike ma n'ọkwa ọmụmụ, ọ bụ ezie na onye ma ihe ha na -ekwu n'oge egwuregwu!
Ụfọdụ nkuzi golf ndị ama ama na US gụnyere Riviera Country Club na California, Shadow Creek na Nevada na Pine Valley Golf Club na New Jersey.
Gaa n'ihu na -agụ iji chọpụta klọb golf na ebe ntụrụndụ mere ndepụta 'kacha ewu ewu' na US.
Okpokoro ahịhịa bụ otu n'ime nkuzi abụọ ejikọtara na American Club. Ọ na-aga n'akụkụ kilomita abụọ nke Ọdọ Mmiri Michigan n'ụsọ njikọ njikọ oghere 36. Ihe nkuzi a bụ 6,757m ma duo nwunye, Pete na Alice Dye chepụtara ya.
Omume a bụ ọkaibe igwu egwu. Ọ ga -akwado iko Ryder nke 43 na 2021 ma nwalee ndị mmeri ruo oke ha. Ọ nabatala ọtụtụ Asọmpi PGA na US Senior Open.
Ị nwere ike lekọta onwe gị na ngwugwu golf iji nweta ahụmịhe ahụ nke ọma. Ngwugwu a ma ama bụ To Dye For, nke gụnyere ịnọ abalị atọ, egwuregwu oghere 18 na nkuzi golf nkeji iri atọ.
N'agbanyeghị na ọ dabere na Wisconsin, nkuzi a na -echetara ọnọdụ ụlọ ugbo Irish mara mma. Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ thatụ ị nwere ike iri nri mgbe ụbọchị golf na -arụsi ọrụ ike. Nchịkọta nri ndị Britain na-egosipụta nri mbinye aka dị ka pudding toffe na akwa atụrụ.
Dabere na Augusta, Georgia, emepere klọb a na 1930. Nke a bụ otu klọb kachasị na United States ebe ọ bụ naanị maka ndị otu na ndị ọbịa naanị.
Ọtụtụ ndị mmadụ ga -amata klọb Augusta mgbe ha lechara ya na enyo telivishọn ha kwa Eprel. A nabatara asọmpi nna ukwu na nkuzi ahụ kemgbe Bobby Jones mepụtara ya na 1934.
Ọgụgụ a bụ oghere 18, par 72. Ọ bụ onye mmeri amateur, Bobby Jones na onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, Alister Mackenzie chepụtara ya. Duo a gosipụtara na ọ bụ njikọta dị ike yana nsonaazụ ya bụ ihe atụ zuru oke nke oghere dị ọcha ma mepere emepe nke golf golf America.
Ogologo ngụkọta oge agụmakwụkwọ bụ 7,475 yaadị. A na -akpọ oghere nke ọ bụla aha osisi n'ihi na saịtị ahụ bụbu ebe a na -elekọta ụmụaka. A na -akpọ oghere nke mbụ Tea Olive, yana aha ndị ọzọ gụnyere Flowering Crab Apple (1th) na Carolina Cherry (4th).
A họọrọ Kiawah Island Golf Resort na ọkwa 100 kacha elu n'ụwa (The Ocean Course) na 2020. Ọ kwadokwara asọmpi PGA na 2021, nke bụ naanị otu n'ime asọmpi anọ kacha mkpa nke a na -eme naanị maka ndị gọlf ọkachamara.
Enwere nkuzi ise na agwaetiti Kiawah: Oke Osimiri, Osprey Point, Oak Point, Turtle Point na Cougar Point. Usoro nkuzi ọ bụla bụ oghere 18, 72 par. N'inwe oghere iri n'akụkụ Atlantic na asatọ ọzọ na -eche ihu, nkuzi nke Ocean nwere oghere oke osimiri na Northern Hemisphere. Nke a na -eme nkuzi ikuku nke na -agbakwụnye ihe ịma aka nke usoro ahụ.
Ebe a na -eme golf na South Carolinian nwere ụlọ oriri na ọ 14ụ XNUMXụ XNUMX, ụlọ mmanya na cafes, gụnyere Ocean Room na Jasmine Porch. Ị nwere ike nọrọ oge ezumike na spa na ụlọ ezumike nke kpakpando ise wee nọrọ na Hotel Sanctuary, ụlọ ezumike nka ma ọ bụ n'ime ụlọ nkeonwe.
Otu mba Riviera
N'ịbụ nke dị na Pacific Palisades, California, Riviera Country Club emeghewo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị afọ. Ọzụzụ a na -akwado Los Angeles Open mgbe niile ma na -akwado ịnabata ihe omume golf na asọmpi 2028.
Yiri ọtụtụ klọb ndị ọzọ na ndepụta a, Riviera Country Club bụ maka naanị ndị otu. Ndị otu gara aga gụnyere Walt Disney na Dean Martin. Ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụ naanị ndị ọkaibe nwere ohere ịbanye na klọb a pụrụ iche - a na -anụ kepu kepu maka ndị otu $ 250,000!
Oghere nwere oghere 18 nwere ihe pụrụ iche dịka ahịhịa Kukuya, nke bụ ahịhịa dị mkpa sitere n'Africa. Klọb ahụ gụnyekwara klọb tenis ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga egwuregwu ọzọ. Ị nwere ike nọrọ n'otu n'ime ụlọ iri abụọ na anọ ahọpụtara ma ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ka onye otu kpọọ gị ka ị kpọọ klọb.
Ogige Golf Pine Valley
E mepere Pine Valley Golf Club na 1919 na Southern New Jersey. Kemgbe ahụ ka amatala ya dị ka otu n'ime nkuzi kacha sie ike n'ụwa, yana otu n'ime naanị ya.
Ọ gwụla ma onye otu a kpọrọ gị ka ị bịa leta ya, ọ gaghị ele anya na ị ga -egwu nkuzi a dịka onye otu. A na -anụ kerịta ihe dị ka ndị otu 930 n'ụwa niile, n'agbanyeghị na ndepụta a bụ ihe nzuzo echedoro nke ọma. N'adịghị ka klọb ndị ọzọ na -enye usoro ntinye akwụkwọ otu, ndị isi oche na Pine Valley Golf Club na -abịakwute ndị nwere ike sonye ọhụrụ.
2021 ahụla nnukwu mgbanwe na klọb - ụmụ nwanyị nwere ike isonye ugbu a dị ka ndị otu ma nwee egwuregwu a na -amachibidoghị iwu. N'afọ ndị gara aga, a na -enye ụmụ nwanyị ohere igwu egwu naanị n'ehihie Sọnde. Septemba hụkwara Pine Valley na -anabata iko Crump Cup kwa afọ, nke akpọrọ aha onye guzobere klọb ahụ. Bọchị Crump Cup bụ naanị oge a na -ahapụ ndị ọha ka ha banye na klọb ahụ.
Ebee ka ọ dị mkpa iji limousine rute ebe a na -egwu golf? Shadow Creek na -enwe mmasị ime ihe dị iche iche na ihe egwu a bụ naanị akụkụ nke amara ya. Ndị ọbịa ga -anọrịrị n'ụlọ nkwari akụ MGM dị na Las Vegas iji nwee ike igwu egwu na golf ihe dị ka nkeji 20 ruo 30.
Shadow Creek bidoro dị ka klọb nkeonwe na 1989, mana ọ ghọrọ ọha n'ihu afọ 20 gara aga. Tom Fazio chepụtara ụzọ oghere 18 n'ime oke osimiri n'etiti gburugburu ọzara, na-ele ugwu anya.
Usoro a kwadoro PGA Tour's CJ Cup na 2020 ma kwadokwa egwuregwu ahụ: Tiger vs. Phil (Tiger Woods vs. Phil Mickelson) na 2018.
Oakmont mba klọb
Ị nwere ike ịtụ anya klaasị na ọmarịcha echiche n'otu n'ime klọb golf kacha ochie na mba ahụ. E hiwere Oakmont Country Club na 1903 ma debe aha ya nke ịbụ otu n'ime nkuzi kacha sie ike gburugburu.
Ahịhịa ngwa ngwa na bred miri emi dị 175 (gụnyere Chọọchị Pews a ma ama) na -eme ka usoro mmụta Pennsylvania a bụrụ ihe ịma aka ọbụna onye golfer kacha nwee ahụmịhe. Naanị ị ga -enwe ike ịga ma ọ bụrụ na akpọrọ gị ka ị bịa klọb dị ka ọbịa ma ọ bụ bụrụ onye otu n'onwe gị.
Klọb ahụ na -akwadokwa ọtụtụ agbamakwụkwọ na mmemme ụlọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ha. Nabata mmemme gị na Ballroom mara mma, ma ọ bụ họrọ Ọbá akwụkwọ maka ihe omume dị jụụ na mmekọrịta chiri anya.
Enwere nkuzi isii dị iche iche na Bandon Dunes Golf Resort. Ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu na ụzọ njikọ ebe ị na -eleghara Oke Osimiri Pasifik anya. Nchekwa Bandon bụ oghere nwere oghere 13 nke karịrị ezigbo egwuregwu. Ihe niile sitere na nkuzi a na -aga na Wild Rivers Coast Alliance, nke na -akwado nchekwa, obodo na akụ na ụba mpaghara.
Ị gaghị agụ agụụ n'ihi na enwere ụlọ oriri na ọ barsụ sevenụ na ụlọ mmanya asaa ịhọrọ. Gbalịa mee nri mpaghara Pacific Northwest na Pacific Grill, ma ọ bụ nri ọdịnala Scottish na McKee's Pub.
Nwee obi ụtọ na klọb golf na nkasi obi nke ụlọ nke gị site na ịhọrọ ime ụlọ na The Inn. N'ebe a, ị ga -enwe ike ịhụ ụzọ nkuzi anaghị akwụsị akwụsị na mpio gị. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike họrọ ịnọ na ọdọ mmiri Lily, ebe ị nwere ike nwee oche nkeonwe gị na -ele oke ọhịa. Enwere nhọrọ nke ukwuu na ụlọ isii ịhọrọ site na.
Obodo Muirfield nwere nnukwu aha ị ga -eso ebe aha ya bụ ebe egwuregwu golf kacha ochie n'ụwa. Jack Nicklaus chọrọ ịsọpụrụ usoro ama ama mgbe ọ haziri nke ya na 1974.
Dublin, Ohio dị anya site na Scotland, mana usoro ahụ na -akwụgide n'ihe nketa ya. N'ịbụ nke dị n'ofe acres 220, ndị otu na ndị ọbịa ha nwere ike igwu egwu na ọtụtụ ihe egwu mmiri, bonka na ụzọ dị warara.
Nicklaus na -ahụ maka nkwalite oge niile ka klọb ahụ na -aga n'ihu na -agbanwe teknụzụ na ọganihu ụlọ. 2020 hụrụ nnukwu nwughari na nkuzi ahụ ma kwalite ọtụtụ oghere.
Enwere ebe anọ ị ga-eri nri na klọb ahụ, gụnyere ime ụlọ ezinaụlọ Golden Bear, nke nwere ọkụ nwere ihu abụọ.
Guzosie ike na 2009, The Country Club na Muirfield Village Foundation na -enyere ụmụaka nwere mkpa pụrụ iche aka na Ohio. Kemgbe e hiwere ya, ntọala enyela onyinye enyemaka dị iche iche karịrị $ 250,000.
Jamaica: Ọmụmụ ihe gbasara Ọzụzụ Ọhụrụ Pụrụ Iche
Etihad, Boeing, GE, Airbus na Rolls Royce na ọhụrụ ...
Lines Delta Air Lines: ntinye akwụkwọ mba ofesi ọhụrụ ruru 450…
Mmadụ 45 nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala njem na Bulgaria